ဂရုပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါယောက်ျားနှင့်မိန်းမများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလေ့ကျင့်မှုကိုရနိုင်ပါသလား။ (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
Dawson, Samantha J ကို .; Lalumièreမာတင် L ကို .; Allen က, Scott W .; Vasey ပေါလုသည် L ကို .; Suschinsky, ကယ်လီဃ
အပြုအမူသိပ္ပံ / Revue canadienne des သိပ္ပံ၏ကနေဒါဂျာနယ် comportement, Vol 45 (3), ဇူလိုင် 2013, 274-285 du ။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေးသီးခြားစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုများ၏လေ့ထဲမှာလိင်ခြားနားချက်အကြံပြု: အမျိုးသမီးများ၏၏တုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ပေါ်လာသော်လည်းယောက်ျား၏တုံ့ပြန်မှုများကိုအလွယ်တကူ habituate ။ ဒီလေ့လာမှုတွေလည်းသူတို့ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအာရုံကိုအပြုသဘောလေ့သက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်မှုအယူအဆအမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုထိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါဒဏ်ရာကနေသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထံ၌အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်ပြောဆိုသော။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုံ့ပြန်မဟုတ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသူတို့လူတို့သညျအဘို့ထက်မိန်းမတို့အဘို့ဖွယ်ရှိပိုမိုမြင့်မားကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေသလောက် habituate မပြုစေခြင်းငှါအောက်ပါအတိုင်း။ လတ်တလောလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာအလားတူတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်များတွင်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုများနှင့် Self-အစီရင်ခံအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အလေ့သက်ရောက်မှုအသံထှကျ။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသောအခါနှင့်လိင်ခြားနားချက်လေ့လာတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုပါကလေ့ရူးနှမ်းနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရကြ၏။ သုံးဆယ့်ခြောက်ဦးယောက်ျားမိန်းမတို့တစ်ဦးအတွင်း-ဘာသာရပ်များလေ့ဒီဇိုင်းကိုအောက်ပါ 14 အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှု circumferential phallometry နှင့်အင်္ဂါဇာတ် photoplethysmography သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ Poststimulus ratings မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းများတွင်လိင်အင်္ဂါသော်လည်းမပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများလေ့ပြသခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးအာရုံစိုက်မှု၏မြင့်မားသောဒီဂရီအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်အာရုံကိုပြောင်းလဲဘို့ထိန်းချုပ်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုအဘို့အလေ့သက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်း။ ပြင်ဆင်မှုအယူအဆများအတွက်လိင်ကိစ္စတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုများတွင်အာရုံစိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။